Kyaw Zay Ya » Archives » 2010 » January
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Monthly Archives: January 2010	January 18th, 2010
0 BarCamp Yangon 2010 Invitation for International Barcampers …BarCamp Yangon 2010 Invitation for International Barcampers …
image from Barcampyangon.org
Tweet This Post BCY2010 invitation January 5th, 2010
1 Free application on my netbook ……. …Free application on my netbook …
ကျနော့် ရဲ့ Laptop မှာ အလကားလဲ ရ အသုံးလဲ တည့်တဲ့ software တွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ ထဲကမှ အမြဲလိုလို အသုံးပြုနေဖြစ်တဲ့ software တွေကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်ပဲ ကျနော် ပို့စ်ရေးရကြိုးနပ်ပါတယ်။ download link လေးတွေကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ Firefox and Google Chrome
browser နှစ်ခုလုံးကို ကျနော်သုံးတယ်။ နှစ်ခု စလုံးလဲ မြန်လဲ မြန်တယ် စိတ်လည်း ချရတယ်။ နောက်ထပ် Add-on တွေ ထပ်ထည့်ချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ Firefox ကိုသုံးပေါ့ (i.e. ad blocker, password manager, video downloader, page translator etc.) Google Chorme ကတော့ add-on အတွက် limited တော့ ဖြစ်နေ တုန်းပဲ။ (10 Cool Extensions for Google Chrome.)
၂။ Auslogics Disk Defrag (Disk Defragmenter)
window မှာ နဂိုကတည်းက disk defragment ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Auslogics က အသုံးပြုရလဲ လွယ်တယ်၊ မြန်လဲ မြန်တယ်။ CNET.com မှာတော့ Auslogics က poll အများဆုံးရထား လို့ အသုံးပြုသူများ ရဲ့နှစ်သက်မှု အရဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။
Download Auslogics Disk Defrag: www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/overview(Platform: Windows only)
၃။ Glary Utilites (System Maintenance)
Glary Utlities က အလုံးစုံ Free ဖြစ်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့computer ကို Protecting, cleaning, repairing နဲ့ computer speed ကို one-click option လုပ်ပြီး အရှိန်မြှင့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာက installation လုပ်နေ စဉ် အချိန်မှာ Ask Search toolbar လုပ်မလားလို့ မေးစဉ် uncheck လုပ်ထားခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Download Glary Utilities: www.glaryutilities.com/gu.html?tag=download(Platform: Windows only)
၄။ IZArc (Universal Archiver / Extractor)
winzip, winrar တွေကို ဖြည်နိုင် compress လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် format ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကိုလဲ compress/ decompress လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CDI, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO. etc…. ဒါ့အပြင် CD image များဖြစ်တဲ့ ISO, BIN, CDI and NRG files များကိုလဲ ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Download IZArc: http://www.izarc.org/download.html(Platform: Windows only)
Note: When installing IZArc make sure to uncheck the “recommended” option to install PalTalk.
၅။ Google Picasa Software (Photo Management)
Picasa က သင့် ကွန်ပျူတာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပုံတွေကို အလိုအလျောက် ရှာပေးနိုင်ပြီးတော့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ စုဆောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ face recognition effect လဲ ပါဝင်ပြီး နောက်ထပ် features တွေကတော့ video slideshows, photo collages တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Photos များကို Album အလိုက် Folder အလိုက် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ Youtube video. ဒါလေးကို ကြည့်ပြီး လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ဒီထက်ပိုသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် guide for Picasa. Download Picasa Software: http://picasa.google.com/(Platform: Windows / Mac / Linux)
၆။ doPDF (PDF Printer)
တစ်ခါတစ်ခါမှာ လူတိုင်းလောက် နီးနီး ကိုယ့်ရဲ့ documents တွေကို PDF ပြောင်းဖို့ လိုတာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ doPDF လေးကို သုံးဖို့ ညွှန်းပါရစေ။ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ web page ကိုပဲ PDF ပြောင်းချင်သလား။ ဒါမှ မဟုတ် word documentလား၊ Excel spreadsheet လား Photo တွေကို PDF အဖြစ်ပြောင်းချင် တယ်ဆိုရင်တော့ မည်သည့် ပရိုဂရမ်ကနေ မဆို drop-down menu ထဲက Print ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး doPDF printer ကို ရွေးချယ် ပေးရုံပါပဲ။ dpi တွေကိုလဲ 72 ကနေ 2400 အထိ သင့်စိတ်ကြိုက် setup ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Download doPDF: www.dopdf.com(Platform: Windows only)
Tweet This Post free applications January 4th, 2010
post from here Tweet This Post announcement, Barcamp Yangon, News January 3rd, 2010
1 2010 …2010…
ဘလော့ခ်ဂါ သူငယ်ချင်း အချို့နဲ့ အတူ ညခုနှစ်နာရီလောက်ကတည်းက ရွှေမန်းမှာ ထိုင်ဖြစ်တယ်။ ကိုဇော်ဇော့် ရဲ့ ကလေး နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ အဲဒီ့ညမှာပဲ ကိုညီလင်းဆက်၊ ဖိုးသူတော်တို့နဲ့အတူ သင်္ဃန်းကျွန်းဘက်ကို သတင်းသွားမေးဖြစ်တယ်။ အလုံးစုံ အကုန်ပြီးတော့ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီး 2009 ရဲ့ နောက်ဆုံးည ကို သီချင်းဆို ဂစ်တာတီးရင်း Happy New Year လို့ တစ်ခွန်းမှ မအော်ပဲနဲ့ ကုန်ဆုံးပစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေဖုန်းတွေကို SMS ပို့ပြီးတော့ Happy New Year လို့ အော်ပစ်လိုက် သေးတယ်။
အူကြောင်ကြောင်နဲ့ နိုးလာပြီးတော့။ ဆေးလိပ်တစ်လိပ် ကို မီးညှိကာ အိမ်သာ ထဲမှာ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကုန် သည် အထိ အချိန်ဖြုန်းပစ်လိုက်တယ်။ အိမ်သာ ထဲက ထွက်လာတော့ 2009 က အစားအစာ တွေက မကျေ လို့ ထင်ပါရဲ့ တဝေါ့ဝေါ့နဲ့ ထိုးအန်ပါလေရော။ 2010 အစမှာတော့ ဆေးခန်းသွားခြင်းနဲ့ အစထွက်ခဲ့ပြီ။ ဆရာဝန် ကတော့မှာလိုက်လေရဲ့2နာရီခြား တစ်ခါ အစာ စားဖို့နဲ့ စားရင် ပျော့ပျော့လေး စားဖို့ ဆေးလိပ်၊ အရက် လုံးဝ မသောက်ဖို့ မှာလိုက်လေရဲ့……………။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဦးမယ် စိတ်ကူးတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ကိုလဲ ပိုင်ချင်သေးတယ်။ အဆိုးဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့ သိန်းခုနှစ်ထောင်လောက်တော့…လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်မိ တာပဲ။ Tweet This Post 2010 January 2010
Who's Online5 visitors online now0 guests,5bots,0membersMap of VisitorsPowered by Visitor MapsArchives	May 2013